လမင်းခင်: May 2012
သမဂ္ဂ ကို ဘယ်လိုဖွဲ့ မလဲ ? ဆိုတာနဲ့အခွင့်အလမ်း တွေ
Posted by LRDP at 8:32 AM0comments Links to this post
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အလုပ်သမားများသမဂ`ဂ ကို နေပြည်တော် ဒက္ခိဏမြို့ နယ် ၇ဲတိရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူများ မှ ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည် ကို လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များမှ သွားရောက် ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့သည်။ လမ်းခရီးသွားလာနေထိုင်စရိတ်များကို ပင်လယ်ပျော်များသမဂ`ဂ အတွင်းရေးမှုးဦးတင်ကိုကိုသက်မှ ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဦးတင်ကိုကိုသက် မှ
လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမမဂ္ဂများဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင် ဦးထွန်းထွန်းနိုင် မှ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးသမဂ္ဂ(ရဲတိကျေး၇ွာ) တွင်
Posted by LRDP at 8:29 AM 1 comments Links to this post
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အလုပ်သမားများသမဂ`ဂ ကို နေပြည်တော် ဒက္ခိဏမြို့ နယ် ၇ဲတိရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးတောင်သူများ မှ ဖွဲ့ စည်းခဲ့သည် ကို လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီဝင်များမှ သွားရောက် ဆောင်ကျဉ်းပေးခဲ့သည်။ လမ်းခရီးသွားလာနေထိုင်စရိတ်များကို ပင်လယ်ပျော်များသမဂ`ဂ အတွင်းရေးမှုးဦးတင်ကိုကိုသက်မှ ကူညီပေးခဲ့သည်။
ဒက္ခိဏ မြို့ နယ် မှ စိုက်ပျိုးခွင့်ဆုံးရှူံးနေသော စိုက်ပျိူးရေး တောင်သူများ က ၄င်းတို့သမဂ`ဂ ဖွဲ့ နိုင်ရန် အကူအညီတောင်းဆိုမှုကြောင့် လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများပေါ်ပေါက်ရေးကော်မတီမှ သွားရောက် ခဲ့
Posted by LRDP at 8:26 AM0comments Links to this post
မပို ရဲ့ အကိုရင်း ဖြစ်သလို ကျမတို့ ရဲ့ ရဲဘော် အကိုကြီး ပါ
NLD မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ ဗိုလ်ထီး အတွက် စုမိကြပြန်တယ်
Posted by LRDP at 9:23 AM0comments Links to this post
အကိုကြီး ကိုဌေးဝင်း၇ဲ့ နောက်ဆုံး ခရီး
ကိုဌေးဝင်းရဲ့ ပါတီ အပေါ်သေခါနီးအထိ အလုပ်တွေ လုပ်ပေးသွားပုံပါ --
လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများဖြစ်ပေါ်ရေးကော်မတီမှဦးဆောင်၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိအလုပ်သမားရေးစိတ်ဝင်စားသူများစုပေါင်း ကာ ကျင်းပသောမေဒေးနေ့ အခမ်းအနားကို၈၈ မျိုးဆက်မှ ဦးကိုကိုကြီး တက်ေ၇ာက် ဟောပြော
Posted by LRDP at 5:41 AM0comments Links to this post
လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများဖြစ်ပေါ်ရေး ကော်မတီမှ ဦးထွန်းထွန်းနိူင် ၈၈ မျိုးဆက်များ၏ သ၀ဏ်လွှာဖက်ကြား
Posted by LRDP at 5:39 AM0comments Links to this post
အဖွဲ့ အစည်း အမည် မဖြစ်သင့် သမဂ`ဂသာဖြစ်သင့်သည် သမဂ`ဂ အမည်ကိုမစိုးရိန် ရန် အစိုးရထံ တိုက်တွန်း
Posted by LRDP at 5:38 AM 1 comments Links to this post
မေေ၏းနေ့ သို့ တက်ေ၇ာက်လာသော SUB ပင်လယ်ပျော်များသမဂ`ဂမှ ဦးတင်ကိုကိုသက်
Posted by LRDP at 5:36 AM0comments Links to this post
ဖွဲ့ စည်းရေးတွင် မူလပထမ က သမဂ`ဂ အမည်ကို ပေးမသုံးသော်လည်း ယနေ့ ခွင့်ပြုလိုက်ပြီုဖစ်ကြောင်း တရားဝင် ဖွဲ့ စည်းခွင့်ရသည့် ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်သမားအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှုး ကိုဆိုင်းမှ ပြောလာပါသည်. ။
သို့ သော် မြန်မာနိုင်ငံပင်လယ်ကူးသဘောင်္သားများအဖွဲ့ ချုပ် (မှတ်ပုံတင်ကျပြီး) မှ အတွင်းရေးမှုး ကပတိန် ဦးစိုးမင်းအောင်သည် အခြေခံ အလုပ်သမားအဖွဲ့ များကို သြဇာလွှမ်းမိုးချင်သော သဘောထားများပြည့်နက်နေသဖြင့် အခြေခံ အလုပ်သမား အဖွဲ့များမှ စိုးရိမ်မှုရှိနေကြောင်း သိရသည် ။
Posted by LRDP at 5:34 AM0comments Links to this post
သမဂ္ဂ ကို ဘယ်လိုဖွဲ့ မလဲ ? ဆိုတာနဲ့အခွင့်အလမ်း တေ...
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး အလုပ်သမားများသမဂ`ဂ ကို နေပြည်တေ...
ဒက္ခိဏ မြို့ နယ် မှ စိုက်ပျိုးခွင့်ဆုံးရှူံးနေသော စ...
မပို ရဲ့ အကိုရင်း ဖြစ်သလို ကျမတို့ ရဲ့ ရဲဘော် အကို...
NLD မျိုးဆက်ဟောင်းတွေ ဗိုလ်ထီး အတွက် စုမိကြပြန်တယ်...
ကိုဌေးဝင်းရဲ့ ပါတီ အပေါ်သေခါနီးအထိ အလုပ်တွေ လုပ်ပေး...
လွတ်လပ်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂများဖြစ်ပေါ်ရေး ကော်မတီမှ ဥ...
အဖွဲ့ အစည်း အမည် မဖြစ်သင့် သမဂ`ဂသာဖြစ်သင့်သည် သမဂ`...
မေေ၏းနေ့ သို့ တက်ေ၇ာက်လာသော SUB ပင်လယ်ပျော်များသမဂ...
အစိုးရမှ ခွင့်ပြုလိုက်သောအလုပ်သမားသမဂ`ဂ ဖွဲ့ စည်းေ...